AMNIGA, DHIB U DHISIDA IY O NABADA
GIZ dib ay uu eegi kartaa taariikh dheer oo la kaashaneeysay Soomaaliya, oo ay ka shaqeyneysey dalka tan iyo 1964. Labaatan sanadood ka dib, oo iskaashiga ka koobnaa gargaar Ku meel gaarka ah iyo kuwa bani'aadamnimada, GIZ dib ay u bilaabtay hawlihii qaybaha dheeraad bilowgi 2015. Wakhtigan xaadirka ah 81 shaqaale oo wadaniya iyo 13 caalamiya ayaa wadanka ka shaqeeya. xigasho (shaxda shaqaalaha ee 31.12.2018). Faylasheeda Soomaaliya waxaa hadda maamulo xafiiska GIZ ee dalka Kenya.
In ka badan 20 sano oo dagaal sokeeye iyo dowladda Ku Meel Gaarka ah ka dib, doorashada ee Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo furitaanka ee Qorshaha Heshiiska Cusub oo 2012 waxay calaamadeeyeen bilowga cutubka cusub ee taariikhda dalka. Federaalka wasaaradda Jarmalka ee Iskaashiga Dhaqaalaha iyo Horumarinta (BMZ) ayaa isku diyaarineysay la siiwadi taanka ee horumarinta la kaashaneyso Soomaaliya tan iyo sanadkii 2011
Soomaaliya waa mid ka mid ah wadamada aduunka ugu faqiirsan iyo tan ugu nugul. Labaatan sano oo dagaal sokeeye ah ka dib, gobolka waxa uu awoodi waayay adeegyada aasaasiga ah, sida daryeel caafimaadka, ama ilaalinta kaabayaashii dalka. Khilaafaadyada hubeysan iyo masiibooyinka dabiiciga ayaa waxay keeneen dhaqdhaqaaqa ballaaran ee dadka qaxootiga ah iyo tiro sii kordheysa oo dadka gudaha ku barakacay. Inkasta oo xaaladaha kala duwan yihiin gobol walbo, waxaa jira baahi badan oo la daboolin dalka oo dhan. Xaaladda ammaanka weli waa muhiim meelo badan dalka, gaar ahaan Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya, aad bay u xannibayaan meelo badan oo ururada caalamiga gali rabeen.
GIZ hadda waxay caawineeysa degaanka maamulka dhismaha wadada ee gobollada Somaliland, Puntland iyo Koonfurta / Bartamaha Soomaaliya si ay u cusboonaysiiyaan iyo si ay uu soo celiyaan jidadkii ugu muhiimsana ee gaadiidka. Waxay sidoo kale la shaqeyneysa la hawlgalayaal dhanka istaraatijiyada lagu sameeyo waara loogu talagalay dayactirka shabakada jidka, taas oo sidoo kale ku lug leedahay waaxda gaarka. Mashruucan ayaa hadafkiisu yahay in la dhiso awooda dowlad ee heer qaran, gobol, degmo, si kor loogu qaado xaaladaha dhaqaalaha ee dadweynaha guud.
Intaa waxaa dheer, Hindisaha gaarka ah ee qaxootiga oo ah qayb ka mid ah Federaalka wasaaradda Jarmalka ee Iskaashiga Dhaqaalaha iyo Horumarinta (BMZ), GIZ waxay taageeraysa dib u dhexgelinta bulshada dib ugu soo noqonayso bulshooyinka guriga iyo is-dhexgalka ee dadka gudaha ku barakacay dinaca bulshooyinka martida ee koonfurta Soomaaliya
Mews Building, Riverside Drive Nairobi
+254 (0) 20 4228 000
Mashaariicda iyo Barnaamijyada
Kalluunku waa nafaqo
Amniga, Dhib u dhisida iyo Nabada
Dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed ee ka soo jeeda waddamada deriska ah